Wasiir Bayle oo Golaha Shacabka ka dalbaday in ay Ansixiyaan Sharciga Dakhliga – Kalfadhi
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Dr C/raxmaan Ducaale Bayle ayaa Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ka dalbaday in ay Ansixiyaan Sharciga Dakhliga oo shalay la horgeeyay Golaha Shacabka.
Wasiir Bayle oo ka Baarlamaanka ka hor aqriyay Hindise Sharciyeedka Dakhliga ayaa sheegay in Sharcigaan uu muhiim u yahay Khayraadka Soomaaliya iyo Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dadaala wax soo saarka Soomaaliya.
Sidoo kale Wasiir Bayle ayaa sheegay in Sharcigaan uu kor-uqaadayo Dhaqaalaha Soomaaliya isagoo ka dalbaday Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya in ay Ansixiyaan Sharcigaan oo faa’idooyin badan ay ka heli doonaan Shacabka Soomaaliyeed.
“Sharciga Dakhliga waxaa uu muhiim u yahay Khayraadka Soomaaliya iyo Ganacsatada, dalka waa u mihiim waxaana idinka codsanayaa in ay Ansixisaan” ayuu yiri Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
“Waxaa idin furin inaa wax kabadal ku sameysaan Sharcigaan oo aad talo ku dartaan laakiin waa inaa ku xisaabtan-taan muhiimadda uu Sharcigaan u leeyahay dalka” ayuu yiri Cabdiraxmaan Ducaale Bayle Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo ka hor hadlay Golaha Shacabka.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay aqrinta 1aad mariyay Hindisa Sharciyeedka Dakhliga oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya iyagoo dhanka kale meel mariyay hindise sharciyeedka Shirkadaha Ganacsiga oo ay si wadajir ah usoo diyaariyeen Wasaaradda Ganacsiga iyo guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka.